I-China Autoclave kunye nabavelisi beBoiler | abaThengi | Iiringi ezibini
Phinda iDrum Steam Boiler
I-Biomass Wood Thermal Bo ...
Ukujikeleza kwe-SHX okujikelezayo kwe-B ...
I-Autoclave kunye neBoiler
Inkqubo ye-autoclave Double Rings evelisiweyo ithatha izibonelelo zeemveliso ezifanayo zangaphandle ezivela kuphuhliso. Amacandelo oxinzelelo oluphambili lwezinto ezizezinye zohlalutyo lwezinto ezigqityiweyo kunye novavanyo lovavanyo oluhlukeneyo, ukuphucula ukubalwa kwamandla.
Uxinzelelo lokusebenza: 1.0-1.6MPa
Lobushushu Operating: 184-201 ℃
UkuPhakathi okuSebenzayo: Steam yokuhambisa
Isicelo: Isityalo seFlyash Block, Isixhobo sokwakha, uMatshini weAAC,
I-Autoclave-Idumileyo esetyenzisiweyo kwiZityalo ze-ACC, kuMatshini weFlyash, kwiZinto zokwakha, njl.
I-1, ukuveliswa kokuqala kwekhaya lomzi mveliso we-autoclave
2, imveliso umgca ibandla, ukuwelda zonke esizisebenzelayo, umgangatho kunye nozinzo.
3, onke amacandelo oxinzelelo 100% X-ray ukufunyanwa umboniso, iindlela ubhaqo phambili.
I-4, imveliso njengomzi-mveliso wonke, indawo eqhubela phambili nenesiseko esifanelekileyo, ixesha lokufaka ixesha elifutshane, iindleko zotyalo mali ziphantsi.
I-5, ifakwe ngokupheleleyo, ngesandla kunye nolawulo lwekhompyuter.
Izixhobo zokunyanga umphunga ze-Autoclave ezinkulu, zinokusetyenziselwa izitena zesanti ezinyange umphunga, izitena zomlotha, izitena zekhonkrithi ezinamandla, ipali yekhonkrithi enamandla amakhulu, umbhobho kunye nezinye iimveliso zekhonkrithi, kodwa nangenxa yemithi, amayeza, ishishini lamachiza, iglasi, izixhobo zokugquma kunye namanye amashishini.
Uluhlu oluphambili lweParameter
UmzekeloInto FGZCS1.0-1.65x21 FGZCS1.3-2x21 FGZCS1.3-2x22 FGZCS1.3-2x26 FGZCS1.3-2x27.5 FGZCS1.3-2x30
Ngaphakathi Ububanzi mm
Ubude obusebenzayo mm
Uyilo loxinzelelo Mpa
Uyilo lobushushu ℃
Ubushushu Working ℃
Steam ehleliweyo, amanzi acociweyo
Ngaphakathi koLoliwe Umgama mm
Umqulu osebenzayo m3
Ubunzima bomzimba uKg
Kukonke Ubungakanani mm
UmzekeloInto FGZCS1.5-2.68x22.5 FGZCS1.5-2.68x26 FGZCS1.5-2.68x39 FGZCS1.5-2.85x21 FGZCS1.5-2.85x23
UmzekeloInto FGZCS1.5-2.85x24 FGZCS1.5-2.85x25 FGZCS1.5-2.85x26 FGZCS1.5-2.85x26.5 FGZCS1.5-2.85x27
UmzekeloInto FGZCS1.5-2.85x29 FGZCS1.5-2.85x36 FGZCS1.5-3x23 FGZCS1.5-3x31 FGZCS1.5-3.2x24.5
Ubunzima bomzimba uKg 58400
Kukonke Ubungakanani mm 30634x3640x4495 37634x3462x4495 24875x3516x4804 32875x3516x4804 26570x3750x5027
Edlulileyo: I-AAC Autoclave kunye neBoiler
Okulandelayo: I-SZS Fulverised Coal Boiler I-boiler enamanzi ashushu
umatshini ovele ngokuzenzekelayo
i-autoclave sterilisation lobushushu
I tattoo e-autoclave
iklasi b ngokuzenzekelayo
I-Biomass Boiler-Hot sale- Ukufakelwa okuBushushu obuPhantsi koBushushu boMbane I-Rice Husk Pellets njl. Intshayelelo: I-Biomass Steam Boiler ilungelelaniswe ngumbhobho wamanzi wombane ongemva kwemibhobho yamanzi. Lungisa ityhubhu yomlilo kwisigubhu kunye nodonga lwamanzi wombhobho oqinileyo ulungelelaniswe kwicala lasekunene nangasekhohlo lesithando. Ngomtya omninzi we-ket stoker yokutyisa ngoomatshini kwaye ngofundayo oyilwayo kunye nesitshizi somoya wokungena komoya, qaphela umatshini ophulukana nokukhuphelwa kweer slag. I-hopper ye-ipetroli ihla iye ...
Coal Steam Boiler-Used in Foods, Textile, Plywood, Paper Brewery, Rice Mill etc. Umzimba webhoyila wenziwe phezulu kunye naphantsi kwemigqomo ye-longitudinal kunye ne-tube convection, eyona ndawo ifudumeleyo yokufudumeza, ukusebenza kakuhle kwe-thermal, uyilo olusengqiqweni, ulwakhiwo lwe-compact, inkangeleko entle, isiphumo esaneleyo. Amacala amabini egumbi eliDityanisiweyo anombhobho wokukhanya wombhobho wamanzi odonga, umgqomo wokuxhobisela idrum ...
Intshayelelo. Ukukhutshelwa ngaphandle kwi-chimney. Kukho umphambili kunye nomva weSmokebox Cap kwibhoyila, kulula ukuyigcina. Umtshisi ogqwesileyo wamkela uhlengahlengiso lomatshini oluzenzekelayo lwezinto ezizenzekelayo, amanzi okondla ...
I-SZS Irhasi yeoyile ye-COG Boiler
Intshayelelo: Umzimba we-boiler woluhlu lwe-SZS ubude bayo-2-idrum, igumbi lodidi lwendawo yokudibanisa. Isithando somlilo sikwicala lasekunene kwaye ityhubhu yebhanki yokuhambisa is ikwicala lasekhohlo. Umzimba ugxunyekwe kwi-chassis yomzimba ngokuxhasa ngokuguquguquka embindini kunye neziphelo ezibini zesigubhu esisezantsi, unokukhuseleka ukuvumela umzimba wonke we-boiler ukwanda ecaleni kwendlela. Umlilo ojikelezayo kukho indawo emxinwa yokuqhobosha udonga lwebhubhu. Itywinwe ngokupheleleyo kwaye yahlulwe phakathi kodonga lwe-membrane kwiziko lasekhohlo kwicala c ...